कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज : ढिला भए के हुन्छ ? |
Home स्वास्थ्य/टिप्स कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज : ढिला भए के हुन्छ ?
कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज : ढिला भए के हुन्छ ?
प्रेम लामा । काठमाडौं । देशभर करीब १३ लाख नागरिक कोरोनाविरुद्धको दोस्रो खोप लगाउने पर्खाइमा छन् ।
खरीद सम्झौता अनुसारको १० लाख डोज खोप भारतले समयमै उपलब्ध नगराइदिँदा दोस्रो डोज खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् भारतले समयमै खोप उपलब्ध नगराउँदा र सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दा खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने समय घर्किंदैछ ।
खोपको पहिलो डोज लगाएका नागरिकमा एकखालको मानसिक चिन्ता बढेको छ ।
खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सुनिश्चित हुन नसक्दा उनीहरूलाई चिन्ता थपिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो खोप लगाउने पर्खाइमा १३ लाखभन्दा बढी नागरिक छन् ।
दोस्रो मात्रा दिन ढिलाइ हुँदा हुनसक्ने प्रभावबारे अनुसन्धान हुन जरूरी रहेको उनले बताए ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्- समयमै कोरोनाविरुद्ध खोपको दोस्रो डोज नलगाउँदा शरीरमा नकारात्मक असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता नागरिकमा छ । यसले शरीरमा कुनै हानि गर्दैन
प्रत्येक खोपको लागि दुई डोज लिने समयको अवधि फरक हुन्छ । भारतको सेरम इन्स्िटच्युटले बनाएको कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज लिन पहिलो खोप लगाएको ६ देखि ८ साता उचित समय हो ।
यो समयसीमा बढाएर १२ सातासम्म पनि पुर्‍याउन सकिन्छ । सबैभन्दा राम्रो त सिफारिश गरिएकै समयमा दोस्रो डोज खोप लगाउनुमा हुन्छ । यसले हाम्रो शरीरमा कोरोनाविरुद्ध राम्रो एन्टिबडीको विकास गर्छ ।
समयमै थप कोभिशिल्ड खोप ल्याउन नसकेपछि सरकारले जेठ १० गते मात्रै दोस्रो डोज लगाउने समयावधि १२ हप्ताबाट बढाएर १६ हप्ता पुर्‍याएको छ । ‘भारतले पठाएको नयाँ नियमअनुसार दोस्रो डोज लगाउने समय १२ देखि १६ हप्तासम्म रहेछ । त्यसैअनुसार नेपालले पनि तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
चिनियाँ खोपमा समस्या छैन
त्यसैगरी बाँकी ६० लाख डोज खोप भारत, मेक्सिको लगायत कोरोना संकट सामना गरिरहेका र मित्र राष्ट्रहरूले पाउने छन् ।- अनलाइनखबरबाट